Huawei G510-0010 (U8951) B165 Root | IT Sharing Network
Huawei G510-0010(U8951) အတွက် root လေးပါ။ Unlockcode တောင်းစရာမလိုပါဘူး။ လုပ်ဖို့အလွန်းလွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမယ်တစ်ချက်သတိထားရမှာက မိမိဖုန်းရဲ Build Number လေးကိုအောက်ကအဆင့်တွေမလုပ်ခင်စစ်ပေးပါ။ ဒီကောင်က **Build Number -V100R001C17B165- * မှာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ် အခြား Build Number များဖြစ်ပါက ဖုန်းအတွက် Error များရှိနိုင်ပါတယ်။ Build Number စစ်ဖို့က System Setting>About ထဲမှာရှိပါတယ်။တကယ်လို့ အခု root လုပ်လို့ရတဲ့ Build Number နဲ့တူတဲ့ Firmware လိုချင်တယ်ဆိုလျှင်တော့ဒီအောက်က link မှာ Down ပါခင်ဗျာ။
ကဲ Build Number -V100R001C17B165 ဖြစ်တဲ့ ဖုန်းတွေအတွက် root လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာ
1. G510 Update File ဒါလေးကို Download လုပ်ပြီး Extract လုပ်ပါ။
2. dload folder လေးရပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒီ Folder လေးကို Memory Card ထဲ ဒီအတိုင် Copy ကူးထည့်လိုက်ပါ။ ***ဘယ် Folder အောက်မှမထည့်ပါဘူး***
3. ဖုန်းကိုပိတ်ပြီး Battery ထုတ်ပြီး ခဏစောင့်ါပါ။
ပြီးလျှင် SD Card ထည့် Battery ပြန်ထည့်ပြီ
(Power) နှင့် Vol Up + Vol Down ကို ပြိုင်တူဖိထားပေးပါ။ ဖုန်းမှ Update
ဖုန်းပြန်ပွင့်လာပြီးဆိုရင်တော့ UnlockRoot နဲ့သာ root လိုက်ပါ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
Linn Nay said...
မန်မိုရီ ကဒ် ထဲ ထည့်ဆိုတာ .. ဖုန်းကနေ ဖြုတ်ပြီး လက်ပ်တော့ပ် နဲ့ တွဲရတာကိုပြောတာလား ၊ ဖုန်းနဲ့တိုက်ရီုက်တွဲ၇တာလားခင်ဗျာ ...ပထမတစ်ခေါက်မြန်မာဖောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားတုန်းက လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါ .. ပြီးတော့ အန်လော့ခ် ရုတ် က တစ်ခါတည်းတွဲပြီးကူး .. ပြိးမှ ဘေ့လ်ဒ်နမ်ဘာလ် ကို ဖွင့်ရတာပါလားခင်ဗျာ
အစ်ကိုရေ .. ဖုန်းက ပါဝါပြန်ဖွင့်တော့ လိုဂို ပဲပေါ်ပြီး ဟန်းနေတယ် ...ဘာဆက်လုပ်ရမတုန်းပြောပါဦး ...
logo မှာပဲတတ်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်ေeနတာက firmware ကျသွားတာပါ ......အဲ့ဒါကိုပြန်ရဖို့အတွက် သူ့ ရဲ့ firmware ကိုပြန်တင်ပေးရမှာပါ...တခုသတိထားရမှာက firmware မှန်ဖို့တော့လိုမယ်နော်.....မဟုတ်ရင် bootသေတတ်လို့ပါ............
Pan Crazio said...
build number က V100R001C17B168 ဖြစ်နေတော့ root မ၇ဘူးလားဗျ